Codsashada mashiinka laser-ka ee 3D wuxuu ku guuleystaa abaalmarinta IFES-DESIGN - Geofumadas
Codsiga muraayada laser-ga ee 3D wuxuu ku guuleystaa abaalmarinta IFES
Abriil, 2019 GPS / Qalabka, tabo cusub
Codsiga Leica Cyclone FIELD 360 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta naqshadeynta labaad ee iF DESIGN AWARD 2019.
Si wadajir ah ula shaqeeya shirkadda Ergosign waayo-aragnimo (UX), Leica Geosystems waxay soo bandhigtay codsiga qaybta isku-xirnaanta. Sannadaha 66, IF DESIGN AWARD Waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay qof xayeysiin tayo leh oo naqshadaysan. Codsiga Cyclone FIELD 360 waxaa soo xushay xubin ka tirsan golaha 67, oo ka kooban khabiiro madax-bannaan oo ka socda adduunka oo dhan, laga bilaabo ka qaybgalayaasha 6,375 ee ka socda wadamada 52.
"Aqoonsigani waa sharaf iyo marqaati u ah shaqada adag iyo ballanqaadka kooxdayada si ay u bixiyaan khibrada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah," ayuu yiri Gerhard Walter, oo ah maamulaha wax soo saarka Cyclone FIELD 360.
"Waxaan horumarinnay codsiga Cyclone FIELD 360 ee loogu talagalay dad badan oo isticmaala si loo hubiyo inay qabsan karaan oo ay si fudud ugu shaqeyn karaan xogta qalabka laysarka".
Codsiga loogu talagalay qalabka moobiilka Cyclone FIELD 360 waa qayb aasaasi ah ee xalinta qabashada xaqiiqada saddex-cabbir Leica RTC360 3D. Codsiga wuxuu isku xiraa xiriirka ka dhexeeya 3D xog ururinta beerta iyadoo la adeegsanayo tarbiilaha Leica RTC360 laydhka iyo diiwaanka xogta xafiiska oo isticmaalaya software-ka dib Leica Cyclone XUSUUS 360. Waxay u ogolaataa isticmaalaha in uu soo uruuriyo, isdiiwaangeliyo oo si toos ah dib ugu eego xogta la sawiray iyo sawirada goobta oo isticmaalaya kiniin. Natiijada, nidaamku wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo qofeed oo wanaagsan oo ku saabsan goobta 3D dhabta ah xitaa dadka isticmaala aan la aqoon.
"Naqshad wanaagsan waxaa lagu gaari karaa oo keliya iyada oo loo marayo wadashaqeyn wanaagsan oo leh khubaro farsamo iyo kuwa mustaqbalka. Waxaan awoodnay inaan aragnay mashruucan, "ayuu yiri Toni Steimle, Agaasimaha UX iyo Agaasimaha Bogga Ergosign Zürich.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee taxanaha cusub ee qalabka dhismaha, booqo https://leica-geosystems.com/field360
Ergosign waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee Yurubta ah oo leh khabiiro 140 UX lix goobood oo ku yaalla Jarmalka iyo Switzerland. Waxay u taagan yihiin isugeyn xiiso leh oo leh hal-abuurnimo iyo aqoon farsamo, oo ku salaysan habka caqli ahaaneed. Waxay diirada saaraan shuruudaha macaamiishooda iyo inay si naxariis leh u shaqeeyaan xalka ugu fiican UX.
Leica Geosyada, qayb ka mid ah Hexagon, ayaa isbedel ku samaysay aduunyada cabiraadda iyo barashada sanadihii 200, oo abuuraysa xal dhamaystiran oo xirfadleyaal caalami ah. Waxyaabaha loo yaqaan "premium products" iyo horumarinta xalal cusub, xirfadlayaasha ku jira warshado isku dhafan oo kala duwan, sida aerospace iyo difaaca, amniga iyo ilaalinta, dhismaha iyo wax soosaarka, waxay ku tiirsan yihiin Leica Geosystems dhammaan baahiyahooda geospatial. Iyadoo qalabka saxda ah, software-ga iyo adeegyo la isku haleyn karo, Leica Geosystems waxay maalin kasta ku darsataa qiime kasta oo leh qaabka mustaqbalka adduunkeena.
Taleefanka: + 1-470-304-9770
Post Previous«Previous Bixinta - xalka adag GIS 2D iyo 3D
Post Next #BIM - Koorsada ETABS ee injineernimada Dhismaha - Heerka 1Next »